Ii-FAQs-i-Shanghai Chigong Industrial Co., Ltd.
Ngaba i-SCIC ngumenzi?
Ewe, i-SCIC ngumvelisi wekhonkco elijikelezayo ngaphezulu kweminyaka engama-30 yokusebenzela imakethi yaseTshayina kunye neemarike zaphesheya kwiimigodi kunye nokuphakanyiswa kwemizi-mveliso kunye nokurhwaphiliza izicelo.Sisete i-SCIC ngoku ukuze siphucule intengiso yamazwe aphesheya ukuze ibonelele abathengi kwihlabathi liphela ngenkonzo ebhetele nobungcali.
Ngowuphi umda weemveliso eziveliswa kwaye zibonelelwe yi-SCIC?
Sisebenza ngokukhethekileyo ekwenzeni amakhonkco ajikelezayo omgangatho ophezulu kunye namandla kwishishini lemigodi yamalahle i-Armored Face Conveyors (AFC), i-Beam Stage Loaders (BSL), oomatshini beentloko zendlela, kunye namakhonkco ekhonkco;Senza iBanga lama-70, iBanga lama-80 kunye neBanga le-100 amatyathanga okuphakamisa kunye nokuxhoma (izilingi zamatsheyini), izinyusi zamabhakethi kunye neshishini lokuloba.
Ngaba uyazigcina iimvavanyo ezipheleleyo zangaphakathi kunye nezixhobo zokuhlola kunye nemilinganiselo?
Ewe, siqhuba uvavanyo lwangaphakathi olubandakanya uvavanyo lwamandla okwenziwa, uvavanyo lwamandla, uvavanyo lwempembelelo ye-charpy V notch, uvavanyo lokugoba, uvavanyo lokuqina, uvavanyo lokuqina, uviwo olungonakalisi (NDE), uviwo olukhulu kunye novavanyo oluncinci, uhlalutyo lwezinto ezinokuphela, njl. , ngokuhambelana ne-DIN 22252, i-DIN EN 818 imigangatho kunye neemfuno zomthengi.
Ngaba wenza i-ODM kunye ne-OEM?
Ewe, ngoomatshini bethu abazenzekelayo kunye neerobhothi kunye neenjineli ezinamava, sinokwenza i-ODM kunye ne-OEM ikhonkco elijikelezayo lekhonkco kwiinkcukacha zabathengi.
Ingaba unabo ubuncinci be-odolo yobungakanani (MOQ)?
Kumthengi wokuodola okokuqala, akukho mfuneko ye-MOQ, kwaye siyavuya ukubonelela ngobungakanani obuguquguqukayo bokusetyenziswa kovavanyo lomthengi.
Ithini ikhonkco lakho ukugqiba / ukugquma?
Sinikezela ngeengubo zombala ezahlukeneyo ngokweemfuno zabathengi, kunye ne-galvanization kunye nezinye iindlela zokugqiba ngokuthetha-thethwano ngomyalelo.
Lithetha ukuthini ikhonkco lakho lokupakisha?
Sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokupakisha, kubandakanya iibhegi ze-jumbo, imigqomo, iipallets, iifreyimu zentsimbi, njl.
Yintoni isiqinisekiso sakho somgangatho kunye nesiqinisekiso?
Sikhupha iingxelo ezigcweleyo zovavanyo kunye neefoto zophononongo lwabathengi ngexesha lokwenziwa naphambi kokuhanjiswa ukuze siqinisekise ukukhutshwa ekuhanjisweni.Kwimeko kukho nakuphi na ukungaphumeleli ngexesha lenkonzo yethu yekhonkco elijikelezayo, siya kusebenzisana ngokuqinisekileyo nomxhasi kuhlalutyo lokungaphumeleli (kubandakanywa nokuvavanya kwakhona) ukufumanisa izizathu kunye nezisombululo ezifanelekileyo zokuqonda kunye nokwamkelwa.